အာဇာနည်နေ့ ဥသြသံ နှင့် ရှားပါးပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်ေ​နသည့် အာဇာနည်နေ့ တေးသီချင်း ~ မိုးသောက်ကြယ်
ဆရာတင်မိုး တော်လှန်ရေး ကဗျာများ
About Tin Moe
အာဇာနည်နေ့ ဥသြသံ နှင့် ရှားပါးပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်ေ​နသည့် အာဇာနည်နေ့ တေးသီချင်း
1:15 AM Anonymous No comments
သီဆိုသူ - မေလှမြိုင်
ရေးစပ်သီကုံးသူ - ဂီတာတင်အုံး
မေလှမြိုင်သီဆိုထားသည့် အလေးပြုပါသည်သီချင်း တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် ဒီကိုနှိပ်ပါ
အာဇာနည်နေ့ ဥသြသံ တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် ဒီကိုနှိပ်ပါ
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ နိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း အပါအဝင် နိုင်ငံရေးတွင် အလွန် အရေးပါသော ခေါင်းဆောင်ကြီး ကိုးဦး လုပ်ကြံခြင်းခံခဲ့ရပြီး ကျဆုံးခဲ့သည်။ ထိုနေ့ကို အာဇာနည်နေ့ ဟု သက်မှတ်ပြီး ယနေ့ထက်တိုင် အောင်းမေ့ သတိရကာ အမှတ်တရ ကျင်းပလျက်ရှိသည်။
* အလေးပြုပါသည် *
(နှစ်လဌာနီ အခါရာသီရွေ့ပေမယ့် အာဇာနည်နေ့ကိုဖြင့် မမေ့သင့်ပါသလေ…♫ ♪ ♫ ♪ ♫♪…ယနေ့ဖြင့် သတိ တရားထားဖို့ အခြေ …♫ ♪ ♫ ♪ ♫♪…အများပြည်သူတွေ အများပြည်သူတွေ …♫ ♪ ♫ ♪ ♫♪…အာဇာနည်နေ့ကိုလေ တွေးရှုကာပဲ …♫ ♪ ♫ ♪ ♫♪…အလေးပြုပါမယ်လေ…♫ ♪ ♫ ♪ ♫♪… )၂
စနစ်အနေပြောင်းခဲ့ပေမယ့် အဖြစ်ဟောင်းက ဖြေသော်မပြေ …♫ ♪ ♫ ♪ ♫♪… လွမ်း ... မျက်ရည် မြေခပြီမို့ တွေးတသသ ဆွေးစမရွှင်ပေ …♫ ♪ ♫ ♪ ♫♪… ရွှေရင်ဆူ ကဲ ကြေကွဲဝမ်းနည်းရပုံတွေ ယနေ့ထက်တိုင် အခြေ မမေ့ရက်နိုင်ပါလေ…♫ ♪ ♫ ♪ ♫♪…
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ …♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪…
ကောင်းရာသုဂတိရောက်ရှိကြပြီလေ…♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪…
တေးကဗျာ အနုစာခွေရေးကာ တေးပြု …♫ ♪ ♫ ♪... အလေးပြုပါတယ်လေ …♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪…
Posted in: ကဗျာများ(poems)
မိုးသောက်ကြယ်အဖွဲ့သူ/သားများ၏ freedom သီချင်း
ဆိုဒ် ပြုပြင်နေသည့်အချိန်အတွင်း အဆင်မပြေမူများ ရှိပါက တောင်းပန်အပ်ပါသည်
နရဲစွမ် (The Legend of King Naresuan) ရုပ်ရှင် (အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုး)
Dvd versionလက်ထဲသို့ရလာလို့မြန်မာ့သမိုင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ရာဇ၀င်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ကြိုးစားပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။ youtubeမှာတင်ထားတာတွေ့ရပေမဲ့ ရ...
ဂျပန်- မဲခေါင် ချစ်ကြည်မှုဖလှယ်ရေး အစီအစဉ် မြန်မာသတင်းစာဆရာ ၁၉ ဦး ဂျပန်သို့ ရောက်ရှိ
အရှေ့အာရှနိုင်ငံအသီးသီးတို့တွင် နောင်အနာဂတ်၌ အရေးပါသော တာဝန်များ ကို ထမ်းဆောင်သွားမည့်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအကြား၌ အချင်းချင်းနားလည်မှု ပို မ...
ငှက်တွေတောင် အိမ်ပြန်ကုန်ကြပြီ ငါ့မှာသာ အိမ်မပြန်နိုင်သေး နေ့ဟာ ကြွေကာနီး သစ်သီးတစ်လုံးလို ပြီးပြည့်စုံစွာ ၀င်းမှည့်နေလေရဲ့ ရှင်းမပြတတ်အော...
ဘုံဝတိံသာမှ ဆရာဂျမ်းကို ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုခြင်း
(မိုးသောက်ကြ ယ်ဂျာနယ် အတွဲ ၄ အမှတ် ၃ မှ) ပြိုးပြက်ဝင်းလက်ပြီး တောက်ပနေတာမျိုးတော့ မဟုတ်...။ ဂုဏ်ဒြပ်တွေ၊ ထယ်ဝါမှုတွေကို ဆရာဂျမ်း သိပ်မနှစ်သ...
လူဆိုသည်မှာ မွေးပြီးလျှင်သေကြမည်သာဖြစ်သည်။ သတ္တ၀ါမှန်သမျှ ဖြစ်လိုက်ပျက်လိုက် ဖြစ်တော့သည်။ ဒါကတော့ . . . တရားသဘောအရပင်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တု...
မိုးမခသတင်းဌာန http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5994&Itemid=1&mosmsg=Thanks+for+your+vote! မှ က...
ဂျပန်NHKမှရိုက်ကူးမည့်ဇာတ်ကားတွင် မြန်မာတိုင်းရင်းသူတစ်ဦးအား အဓိကဇာတ်ဆောင်အဖြစ်ထည့်သွင်းရိုက်ကူး
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဒုက္ခသည်အဖြစ် အခြေချနေထိုင်ခွင့်ရထားသူ မြန်မာတိုင်းရင်းသူတစ်ဦးအား TV ဇတ်လမ်းမှာ အဓိက သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ရိုက်ကူးမည်ကို သိ...
သွားလေရာရာ ၀ါဝါ မည်းမည်း ဖြူဖြူ လူတွေ လူတွေ လူတွေ အမျိုးမျိုး။ တွေ့ရသမျ ၀၀ ဖြိုးဖြိုး၊ ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် မြင်ရင် ‘ဟိုင်း’ ‘ဟောင်း’နဲ့ ခေါင်...
အာဇာနည်နေ့ ဥသြဆွဲသံ အလေးပြုပါသည် သီဆိုသူ - မေလှမြိုင် ရေးစပ်သီကုံးသူ - ဂီတာတင်အုံး အာဇာနည်နေ့ ဥသြသံ နှင့် ရှားပါးပျောက်ကွယ်လုနီးပါး...
အာဇာနည်ဗိမာန် ( သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း)
ဪသာ် ……. အဆောင်ဆောင် နန်းတွေ ကြငှန်းတွေနှင့်နှော၊ အခေါင်မမြန်းခင်က၊ အောင်စာတမ်း ချို့စေဘို့ အောင်ပန်းညှို့ရရှာတဲ့၊ တောင်တမန်းတို့ဗမာမှာ ...
+Download Font +Download Keyboard Layout +Download Keyboard Installer
(ကိုရဲ - သွေးသစ်) (1)
Maung Thar Ya Article (1)
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖခင်ကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ၁၃၂ မွေးနေ့အမှတ်တရ (10)
ကိုကြီးပေါ်ဆောင်းပါး(Ko Gyi Paw Article) (15)
ကိုသက်ကဗျာများ(Ko Thet's Poem) (1)
ဂျပန်လှုပ်ရှားမှုသတင်း(Japan Movement News) (165)
ဆရာတင်မိုး အမှတ်တရ (9)
ဆရာတင်မိုး၏ တော်လှန်ရေးကဗျာများ(Tin Moe's Poem) (10)
ဉာဏ်ဦးမောင်ဆောင်းပါးများ(Nyan Oo Maung Article) (1)
တင်မိုး၏လူငယ့်ကြေးမုံများ(Tin Moe's Lu Nge Kye Mone) (6)
တင်မိုးဆောင်းပါးများ(Tin Moe Article) (2)
တင်မိုး အကြောင်း (1)
တင်မောင်သန်းဆောင်းပါးမျး(Tin Maung Than Article) (1)
ဖိုးသံချောင်းဆောင်းပါးများ(Phoe Than Chaung Article) (1)
မိုးသောက်ကြယ်လှုပ်ရှားမှုများ(MTK Movement) (30)
ပြည်တွင်းသတင်းများ(Local News) (22)
မြ၀တီရဲခေါင်ဆောင်းပါးများ(Myawaddy U Ye Khaung) (2)
ကြေးမုံဦးသောင်းဆောင်းပါးများ(Kye Mone U Thaung Article) (3)
မောင်စင်ကြယ်ကဗျာများ(Maung Sin Kye Poem) (2)
မောင်စင်ကြယ်ဆောင်းပါးများ(Maung Sin Kye Article) (1)
မောင်စွမ်းရည်ကဗျာများ(Maung Swan Yi's Poem) (12)
မောင်စွမ်းရည်ဆောင်းပါးများ(Maung Swan Yee Article) (15)
နိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှုသတင်းများ(USA Movement News) (7)
နိုင်ငံတကာသတင်း(International News) (9)
အာဇာနည်နေ့ ဥသြသံ နှင့် ရှားပါးပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြ...
RSS Twitter uTube Email
Copyright © 2011 မိုးသောက်ကြယ် | Powered by Blogger